Myanmar Monk Student Association: June 2012
သြစတြေးလျားက မြန်မာ့ပညာရေးအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ကူညီမည်
မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် သြစတြေးလျ ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘော့ကာက စနေနေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ဆရာများအတွက် သင်တန်းများ၊ ကျောင်းတက်နှုန်း မြှင့်တင်ရေးနှင့် မူလတန်းတွင် အာဟာရ ကျွေးမွေးရေး အစီအစဉ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။
ထို့အပြင် လက်ရှိ သြစတြေးလျ ပညာတော်သင် တစ်နှစ်လျှင် ၂၀ ဦးမှ ၂၀၁၅ တွင် ၅၀ ဦးအထိ တိုးမြှင့်သွား မည်ဟုလည်း လွှတ်တော်အမတ် ဘော့ကာက ကြေညာခဲ့သည်။
AusAID ပညာရေးစီမံကိန်းများ တည်ရှိရာ ရန်ကုန်တောင်ဖက် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ရာတွင် မြန်မာကလေး သန်းနှင့်ချီပြီး မူလတန်းပညာရေး ဆုံးရှုံးကြမည့် ဘေးကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဆိုပါသည်။
“လာမည့် ၃ နှစ်အတွင်း သြစတြေးလျ ပညာရေးအကူအညီဟာ သန်း ၈၀ ကျော် ရှိပါလိမ့်မယ်။”
“ကျောင်းစတက်တဲ့ ကလေးတွေထဲက မူလတန်း ပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်နိုင်တာ တ၀က်တောင် မရှိဘူး။”
“ဆိုလိုတာကကော့ မြန်မာ့ ပညာရေးသမိုင်းမှာ ဒီမျိုးဆက်ထဲ ကြီးပြင်းလာနေကြတဲ့ ကလေးတွေဟာ သူတို့ မိဘတွေထက် ပညာအဆင့်အတန်း နိမ့်ပါးကြတော့မယ်။”
“သြစတြေးလျအနေနဲ့ ဒီအဖြစ်ဆိုးကို ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားပါမှာ”
“မြန်မာပြည် ကူညီရေးမှာ ပညာရေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိကပါပဲ။”
အခြားသော ထောက်ပံ့ကူညီရေးအဖွဲ့များနှင့်အတူ သြစတြေးလျ အကူအညီတွင် မူလတန်းပညာရေး ငါးနှစ်ကို အရည်အသွေး မြင့်မားစေရန် ကူညီမည်ဟု ဆိုပါသည်။
အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါနယ်ပယ်များတွင် ပညာရေးအကူအညီကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဟု သိရပါသည်။
- ဝေးလံသီခေါင်သော ကျေးလက်ဒေသများရှိ ကျောင်းများတွင် အစားအစာ၊ ဆရာဖြစ်သင်တန်းနှင့် ဖတ်စာအုပ်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ပညာရေးကို ကလေး တစ်သန်းကျော် လက်လှမ်းမီစေရန်။
- ကလေးများ ဖျားနာခြင်းကင်းဝေးစေရန် မူလတန်းကျောင်းများတွင် သောက်သုံးရေသန့်နှင့် သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးရန်။
- မူကြိုကလေး ၈၅ ၀၀၀ ဦးအား အကူအညီပေးရန်။
- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျောင်းတက်သူ ကလေးများအား အစားအစာများကို အိမ်သို့ ထည့်ပေးလိုက်ရန်။ ၄ နှစ်ကာလအတွင်း ကလေး ၁ ဒသမ ၃ သန်းအတွက် အစားအစာ၊ အာဟာရနှင့် ကျောင်းတက်နှုန်းမြင့်မားစေရန် ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Tuesday, 26 June 2012
ကျောင်းသားများအဖွဲ့ MMSA.CM မှ ဦးဆောင်လျှက် မြန်မာ ဘင်္ဂါလီ အဓိကရုဏ်းကြောင့် မီးဘေးသင့် ရခိုင်ပြည်သူများသို့ အလှူငွေ မြန်မာငွေတစ်ဆယ့်ခုနှစ်သိန်းလေးသောင်းတစ်ထောင့်ကိုးရာ(၁၇/၄၁၉၀၀)
၄င်းငွေများလှူဒါန်းခြင်းဟာ မြန်မာရဟန်းတော်ကျောင်းသားများမှ တပါးချင်းစေတနာပေါက်ထည့်ဝင်ကြ
ပြီး အလှူငွေပိုရအောင်ရွှေ့ပြောင်းရခိုင်အလုပ်သမားများ၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများသို့ပါ အသိပေးခဲရာ
အထူးသဖြင့် ချင်းမိုင်မြို့နှင်နီးသော ချင်းရိုင် အပါဝင်မြို့များမှ အားတက်သရောလှူဒါန်းလာမှုကြောင့် အလှူငွေ ဆယ့်ခုနှစ်သိန်းကျော်လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမှ mmsa သတင်းဌါနသို့ ပြောကြားသည်။
ယ္ခုလှူဒါန်းမှုသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၏ကုသိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်အလှူရှင်များအားလုံး သာဓုခေါ်နိုင်ပါ၍ ကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြပါစေရန်လည်း ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းပါကြောင်း သူတော်ကောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆထက်တပိုးတိုး၍ တိုး၍ လုပ်နိုင်ကြစေရန် ဆန္ဒပြုပါကြောင်း
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ကိုကျော် on
1 ( မှတ်ချက်ရေးချင်ရင် )
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ mmsaသတင်း |
ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်း (ဗန်းမော်၊ မိုးမောက်၊ မံစီ ၊ ရွှေကူ) ၄ မြို့နယ်၊ မြို့ပေါ်တွင် ဒုက္ခသည်စခန်း ၁၄ ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ၁၈.၅.၂ဝ၁၂ အထိ စာရင်းအရ ဒုက္ခသည် အိမ်ထောင်စု ၁၉၄၆ စုနှင့် ဒုက္ခသည် ၇၃၃၇ ယောက်ရှိပြီး သူငယ်တန်းမှ တက္ကသိုလ်အထိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ၂၃၇၅ ယောက်ရှိသည့် အနက် ရိုးကြီးရွာ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ မချိုချိုဝင်းက အခြေခံပညာ အထက်တန်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအား ၆ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အောင်မြင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ပွဲကို ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဇွန် ၁၇ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မချိုချိုဝင်းသည် (ဦးလောကို+ဒေါ်မြင့်ရင်) တို့ နေထိုင်ခဲ့သော မံစီမြို့နယ်၊ မွန်မြင့်ကျေးရွာသည် ဗန်းမော်မြို့မှ မိုင်ငါးဆယ်ကျော်ဝေးပြီး ခရီးလမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် သွားလာရ ခက်ခဲလှကြောင်း၊ ကတ္တရာလမ်းမရှိ၊ ဓာတ်မီးတိုင်မရှိ၊ တီဗီ မရှိကြောင်း၊ ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် မရှိသကဲ့သို့ ကျေးလက် ဆေးပေးခန်းလည်း မရှိကြောင်း၊ အစစအရာရာ ရှားပါးပြီး မွန်မြင့်ရွာ ဆိုသည်ကို သိသူနည်းပါးလှကြောင်း၊ ရွာသားအားလုံးနီးနီးမှာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကစီးပွားရေး အဖြစ် လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပြီး ဗဟုသုတ နည်းပါး လွန်းကြကြောင်း၊ ဆင်းရဲချို့တဲ့ နိမ့်ကျလွန်းလှသည့် မိမိ၏မိဘများနှင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၏ဘဝကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး စေရန်အတွက် စာကို အလွန်ကြိုးစား သင်ယူခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာစာကို အောင်မှတ်ရရုံသာ မှန်းခဲ့ပြီး ငါးဘာသာ ဂုဏ်ထူးသာထွက်မည် ထင်ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို့ တစ်ဘာသာပိုပြီး ခြောက်ဘာသာနှင့် အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကျေးလက်နေ ဘဝတူ မိမိရွာသားများကို အကျိုးပြုနိုင်ရန် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု ရည်ရွယ်ထားကြောင်း၊ အမှတ်စာရင်း မသိရသေးပေမယ့် ဆေးလိုင်းရလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားပါကြောင်း၊ တက္ကသိုလ်ရောက်သွားရင်လည်း အရည်အချင်းပြည့် အဆင့်မီအောင်မြင်ပြီး မိမိဒေသအကျိုး၊ မိမိတိုင်းပြည်အကျိုးကို အစွမ်းကုန် သယ်ပိုးနိုင်ရန် ကြိုးစားသွားပါမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
မချိုချိုဝင်းသည် ယခုအခါ ဗန်းမော်ရိုးကြီးရွာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် စေတနာရှင်၊ အလှူရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် ရပ်တည်နေရကြောင်း တက္ကသိုလ် ဆက်တက်နိုင်ရန် အခက်အခဲများစွာ ရှိနေကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
၂ဝ၁၂ ခု တက္ကသိုလ်ဝင် ခရိုင်ပေါင်းချုပ် အောင်စာရင်းတွင် ခြောက်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၄ ဦး၊ ငါးဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၈ ဦး၊ လေးဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၁၄ ဦး၊ သုံးဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၂ဝ ဦး၊ နှစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၆၇ ဦးနှင့် တစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၃၆၄ ဦး စုစုပေါင်း ၄၇၈ ဦး ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
Published on Tuesday, 26 June 2012 04:03
Written by မောက္ခ
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on
ပါရာဂွေးသမ္မတကို လွှတ်တော်က ဖြုတ်ချပြီးနောက် ဒုတိယသမ္မတက ရာထူးဆက်ခံကြောင်း MMG တွင်ဖေါ်ပြ
လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပြီး လူဂိုက ဇွန်လ ၂၂ ရက်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်(ဘယ်)၊ သမ္မတသစ် ဖက်ဒရီကိုဖရန်ကို ကို ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုအပြီးတွင် တွေရစဉ် (ညာ)
ပါရာဂွေးနိုင်ငံတွင် သမ္မတ ဖာနန်ဒိုလူဂိုကို လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံး၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကာ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက် ဒုတိယသမ္မတ ဖက်ဒရီကို ဖရန်ကိုက ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ရာထူးဆက်ခံခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် သမ္မတတစ်ဦးကို လွှတ်တော်က ဖြုတ်ချခဲ့မှုအပေါ် လက်တင်အမေရိက ခေါင်းဆောင်များက ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး ဆက်ခံသူ ဖရန်ကိုကို လက်မခံရန် ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းတွင်လည်း ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က လူ ၁၇ ဦး သေဆုံးစေခဲ့သော မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားရာမှ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် မငြိမ်သက်မှုတွင် ဆိုးရွားစွာ ကိုင်တွယ်ခဲ့မှုဖြင့် ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးဟောင်း သမ္မတလူဂိုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း အထက်လွှတ်တော်၌ ထောက်ခံမဲ ၃၉ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၄ မဲဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သမ္မတဖြစ်လာသော လူဂိုသည် ဆင်းရဲသားတို့အရေး ဆောင်ရွက်သူအဖြစ် ထင်ရှားလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ယာယိမ်း ကော်လိုရာဒိုပါတီ၏ ဆယ်စုနှစ်ခြောက်ခု ကြာ အုပ်ချုပ်မှုကို အဆုံးသတ်နိုင် ခဲ့သူအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လင်ကောင် မပေါ်ဘဲ မွေးလာခဲ့သည့် ကလေးနှစ်ဦး၏ ဖခင်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့် နောက်ထပ်ကလေးနှစ်ဦး၏ ဖခင်ရင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရခြင်းတို့ဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးအရှုပ် တော်ပုံများကြောင့် နာမည်ပျက်ခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်သည်။
အောက်လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း အပြတ်အသတ် အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် အထက်လွှတ်တော်တွင်ပါ ထပ်မံအရေးနိမ့်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရာထူးမှဆင်းပေးခဲ့ရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
လူဂိုသည် သူ၏ အာဏာရ ညွန့်ပေါင်းအတွင်းမှ Authentic Radical Liberal Party ကပါ ကော်လိုရာဒိုပါတီနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖြုတ်ချမှုကို ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာလီကျွန်း ဗုံးဖောက်ခွဲမှုတွင် ပါဝင်သူကို အင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ချမှတ်ကြောင်းMMG News တွင်ဖေါ်ပြ
တရားရုံးက စီရင်ချက်ချအပြီး ပါတက်ကို လက်ထိပ်ခတ်နေမှုအား ဇွန်လ ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် Photo: AFP
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းတွင် ၂၀၀၂ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူ ၂၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့သော ဗုံးခွဲမှု၌ ပါဝင်ကူညီခဲ့သည့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ဂျကာတာ တရားရုံးက ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့သည်။
အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အူမာပါတက်သည် ကြိုတင်ကြံစည်ထားသော လူသတ်မှုနှင့် အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ပေါက်ကွဲတတ်သော ပစ္စည်းများနှင့် လက်နက်များကို ခိုးသွင်းသည့် လျို့ဝှက်ကြံစည်သည့် ပြစ်မှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် နောင်တရသည်ဟု ပါတက်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ရှေ့နေ Asludin Hatjani က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါတက်သည် အင်ဒိုနီးရှား၏ အလိုရှိဆုံး အကြမ်းဖက်သမားများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရ၏ Reward for Justice အစီအစဉ်က ဒေါ်လာ တစ်သန်း ဆုငွေထုတ်ခံထားရသူဖြစ်သည်။
ဘာလီဗုံးဖောက်ခွဲမှုကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်သူ သုံးဦးဖြစ်သည့် Imam Samudra ၊ Amrozi bin Nurhasyim နှင့် Ali Ghufron တို့ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကွပ်မျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး ပါတက်မှာ နောက်ဆုံး ရုံးတင်စစ်ဆေးခံရသူဖြစ်သည်။
ပါတက်သည် ၁၀ နှစ်ကျော် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အဘော့တာဘတ် မြို့၌ အဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ပါတက်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလီများဟု ယူဆရသူ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ဂွမြို့တွင် ဖမ်းဆီးမိကြောင်း နိရဉ္ဇရာသတင်းတွင်ဖေါ်ပြ
ဘင်္ဂလီများဟု ယူဆရသူ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ဂွမြို့တွင် ဖမ်းဆီးမိ
ဘင်္ဂလီ လူမျိုးများဟု ယူဆရသူ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့မှ (၇) မိုင်ခန့်ဝေးသော ဂွကျွန်းတွင် ဖမ်းဆီးမိသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဂွမြို့မှ တံတားကို မြင်ရစဉ်။ ( ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
သူတို့မှာ မည်သို့ မည်ပုံ ဂွကျွန်းသို့ ရောက်ရှိလာသည်ကို အာဏာပိုင်များက တစ်စုံတစ်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးသလို အဆိုပါ ဖမ်းဆီးမူနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ တာဝန်ရှိ အာဏာပိုင်တွေက အခုလို ဖမ်းမိတယ်ဆိုတာ အခုအချိန်ထိ တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်တာ မရှိသေးဘူး။ ဒါကြောင့် လူတွေက စိုးရိမ်နေကြတယ်။ ခုလို အခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့ ဘာကြောင့် ဒီကျွန်းကို လာကြသလဲဆိုတာ သိချင်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စ အမြန်ဆုံး လူသိရှင်ကြား ဖေါ်ထုတ်ပေးဖို့ ဂွမြို့နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မီတီကို စာရေး တောင်းဆိုထားပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့တွင် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူများ ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် ဂွမြို့နယ်တွင် တစ်စုံတစ်ရာ ပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်ရအောင် မြို့ပေါ်နေ ပြည်သူများ၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်းများဖြင့် ဂွမြို့နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မီတီကို လူပေါင်း ၂၈ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရသည်။ သို့အတွက် ဒေသခံ ဂွမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူများက ဂွကျွန်းပေါ်တွင် ရောက်ရှိလာသူ ဘင်္ဂလီများ အကြောင်းကို မြို့နယ် လူထု သိရှိအောင် သတင်း ထုတ်ပြန်ပေးရန် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့က စာရေး တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
“ သူတို့အထဲက ၄ ယောက်ပါ အုပ်စု တစ်စုဟာ ဂွကျွန်းအနီးက ရွှေယချိုင်ကျေးရွာကို ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့က ၀င်လာတယ်။ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ၅ ယောက်ပါ အုပ်စု တစ်စု နောက်ထပ် ၀င်လာတယ်။ အားလုံးကို ဖမ်းမိပါတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း အသုတ်လိုက်ခွဲပြီး ၀င်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြို့နယ် အတွင်းက လူတွေ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဘင်္ဂလီများ ဂွမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးမိသည်ဆိုသော သတင်း အပေါ် အတည်ပြုနိုင်ရန် နိရဉ္စရာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဒေသခံ တစ်ဦးက ယခုလို ပြောသည်။
“ သူတို့ လူပေါင်း ၁၃၀ ပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီလ ၂၀ နေ့က ကျွန်းပေါ်ကို ရောက်လာတယ်။ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ကနေ မလေးရှားကို သွားတာ လှေပျက်ပြီး ဂွကျွန်းကို ရောက်လာတယ်လို့ ဒီလိုဘဲ ကြားပါတယ်။ အခုအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လူများတော့ ဂွမြို့ပေါ်ကို မခေါ်လာနိုင်သေးဘဲ အဲဒီ ကျွန်းပေါ်မှာဘဲ ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
တခြားရဲစခန်းမှူး တစ်ဦးကလည်း အဆိုပါ သတင်းကို သူကြားသိရကြောင်း သို့သော်လည်း တစ်ခြားနေရာ တစ်ခုသို့ အလုပ်ကိစ္စ တစ်ခုဖြင့် ရောက်ရှိနေ၍ အသေးစ်ိတ် မသိရှိရသေးကြောင်း ပြောကြားသည်။
နိရဉ္စရာမှ တယ်လီဖုံးမှ တဆင့် ဂွမြို့နယ် ထွေအုပ်ရုံးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အဆိုပါ သတင်းကို သူတို့ မရရှိသေးကြောင်း တာဝန်ရှိသူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလမ်းများပျက်စီးနေဟု Eleven Midea Group Nwes တွင်ဖေါ်ပြ
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ လမ်းများအနက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပျက်စီးနေသော လမ်းများဖြစ်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ လမ်းနှင့်တံတားဌာနမှ သိရှိရသည်။
လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းများတွင် အမျိုးအစားလေးမျိုး ခွဲခြားထားပြီး အဆိုပါလေးမျိုးတွင် ကောင်းသောလမ်း၊ အသင့်အတင့်ရှိသောလမ်း၊ လက်ခံ၍ ရသောလမ်း၊ အချို့မှာ ဆိုးရွားသောလမ်း(ကတ္တရာကုန်၍ ကျောက်များပေါ်နေသောလမ်း) များ စသည်တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ လမ်းပျက်စီးမှု များပြားခြင်းမှာလည်း လမ်းသားများ၏ အရည်အသွေး၊ ယာဉ်သွားလာမှု များပြားခြင်းတို့အပေါ် များစွာမူတည်နေသည်ဟု သိရသည်။
"ရန်ကုန်မြို့တွင်းက လမ်းတွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းက ပျက်စီးနေတဲ့ လမ်းတွေပါ။ မြို့တွင်းလမ်းတွေက ကတ္တရာသားတွေ ကုန်နေပြီ"ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ လမ်းနှင့်တံတားဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
လမ်းများ၏ ပျက်စီးမှု အနေအထားများကြောင့် ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးနီးပါးရှိ လမ်းမကြီးများနှင့် မြို့တွင်းမြို့နယ်များ အတွင်းရှိ လမ်းသွယ်များကို ပြန်လည်ခင်းကျင်းမှုများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ရေမကြီးသည့် လမ်းများကို ကတ္တရာလမ်းများအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ရေကြီးရေကျော်သော လမ်းများကို ကွန်ကရစ် လမ်းများအဖြစ် ခင်းကျင်းသွားရန် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ခင်းကျင်းရန် အတွက် ကတ္တရာများကို ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်း သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာငွေ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ခင်းကျင်းမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"အခုရန်ကုန်မြို့မှာ အချို့လမ်းတွေကတော့ ပြန်ခင်းတာ ကောင်းနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လမ်းမကြီးအချို့နဲ့ လမ်းသွယ်အချို့ကတော့ ဆိုးနေတုန်းပါပဲ။ တစ်ခါတလေ လမ်းဆိုးတဲ့ ဘက်တွေကို ကားငှားရင် မလိုက်ချင်ဘူး"ဟု ရန်ကုန်မြို့တွင်း အငှားယာဉ် မောင်းနှင်သူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ယခုလက်ရှိ မိုးရာသီကာလ ဖြစ်သောကြောင့် မိုးရွာသွန်းမှု များပြားနေသည့် ကာလအတွင်း ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး၌ လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းထက် လမ်းပေါက်ဖာခြင်းကို ဦးစားပေး ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ မိုးရွာသွန်းမှု နည်းပါးသည့် အချိန်မှသာ လမ်းခင်းခြင်းကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ကတ္တရာက ရေကြောက်တော့ မိုးရွာတဲ့အချိန် လမ်းခင်းရတာ အဆင်မပြေဘူး။ ဒါကြောင့် မိုးများတဲ့အချိန်မှာ လမ်းခင်းတာကို ရပ်ထားမယ်။ မိုးရွာတာ ကျဲပါးတဲ့ အချိန်တွေမှသာ လမ်းခင်းတာကို လုပ်မယ်။ အခုပြည်လမ်းရဲ့ တစ်ဖက်ကို ၁၀ မိုင်ကုန်းကနေ စခင်းတာ ၆ မိုင်ခွဲအထိရောက်တော့ ခဏရပ်ထားတယ်"ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ လမ်းနှင့်တံတားဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးတွင် ကတ္တရာလမ်း ၂၁၀၀ ကျော်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း ၃၂၉၀ ခန့်နှင့် ကတ္တရာ ကွန်ကရစ်လမ်း ၁၇၆၀ ခန့်ရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်းက ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းမကြီး အရေအတွက် ၂၁ လမ်း၊ ပေအားဖြင့် ၅၉၀၀၀ကျော်ကို ခင်းကျင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်ရေ၀င်လာသဖြင့် ဒေသခံများ ပြောင်းရွှေ့ နေရ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အနိမ့်ပိုင်း ရပ်ကွက်များသို့ ရေ၀င်ရောက်နေပြီး ဒေသခံများ ပြောင်းရွှေ့မှုများ ပြုလုပ်နေရပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဧရာဝတီ မြစ်ရေသည် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စိုးရိမ်ရေမှတ်ဝန်းကျင်သို့ စတင် ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
"နိမ့်တဲ့နေရာတွေ ရေ၀င်နေပြီ။ ရွှေ့နေရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းမော် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေ သွားဖို့ တောင် ဒီနေ့ လောလောဆယ် မသွားဖြစ်သေးဘူး။ မြို့ခံတွေက အပြန်ခက်မယ်ဆိုလို့ စောင့်ကြည့်နေရတယ်"ဟု စစ်ဘေးရှောင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပြုလုပ်ရန် ရောက်ရှိနေသော ဒေါက်တာ ကျော်ဇေယျက ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ နံ နက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်က ပြောပြသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲအချိန်တွင် တိုင်းထွာချက်များအရ ၁၁၆၆ စင်တီမီတာသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက နံနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်တွင် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
နှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေး နှင့်ကျောင်းသားသစ်များကြိုဆိုပွဲ
မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းဝေးကြီးနှင့်ကျောင်းသားသစ်ရဟန်းတော်ကြိုဆိုပွဲကြီးတစ်ခုကို(24/6/2012)နေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့ ၊မဟာချူလာလောင်ကွန် University ၊ Monk Chat ခန်းမတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသွားပါသည်၊အဆိုပါအစည်းဝေးနှင့်ကျောင်းသားသစ်ကြိုဆိုပွဲသို့ မြန်မာရဟန်းတော် အပါး ၃၀ ခန့်တက်ရောက်ကာ အဖွဲ့ စည်း၏အခြေခံဥပဒေနှင့် စည်းကမ်းများကိုလည်း အခန်းနားမှူဆရာတော်မှရှင်းလင်းတင်ပြသွားပါသည်။
အခန်းနားကို နမောတသာ သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုဖွင့်ပြီး အစီစဉ်(ဂ)ရပ်ဖြင့် နေ့ လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီထီ ကျင်းပကာ တာဝန်အ သီးသီးနှင့်ရာထူးအသီးသီးတို့ ကိုလည်း မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွဲ့ ရှယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Monday, 25 June 2012
﻿ ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ပြည်တွင်းအထည်ချုပ် လုပ်ငန်းများ၌ လာရောက် လေ့လာမှုများသာ ရှိနေပြီး တိုက်ရိုက်မြှုပ်နှံမှုများ မရရှိသေးကြောင်း သိရ
ပြည်တွင်းအထည်ချုပ် လုပ်ငန်းတစ်ခု အတွင်းပိုင်း မြင်ကွင်း
ပြည်တွင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ၌ ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန် လာရောက်လေ့လာဆဲ အဆင့်သာရှိပြီး တိုက်ရိုက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ၀င်ရောက်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ သတင်းရရှိပါသည်။
“ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းကနေ စပြီးတော့ ပြည်တွင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေ မှာပြည်ပကုမ္ပဏီတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုပြုဖို့ လာဆွေးနွေးကြတာများ လာတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီနဲ့ မတ်လမှာတော့ အများဆုံးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ကြတာထက် အပြန်အလှန် စိတ်ဝင်စားလို့ Business Matching တွေလုပ်ကြ၊ လေ့လာ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ အဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တာတော့ မရှိသေးဘူး။ အဓိကကတော့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကလည်း အသေးစိတ် မသိရှိသေးတာကြောင့် လည်းပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဟောင်ကောင်နှင့် ဗီယက်နမ်မှ လာရောက်မှု အများဆုံးဖြစ်ပြီးဂျာမနီ၊ အမေရိကန်နှင့်အိန္ဒိယတို့မှ အနည်းအကျဉ်း လာရောက်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းမှ ဈေးကွက်ရရှိပြီးဖြစ်သည့် ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်မှ ကုမ္ပဏီအချို့ လည်းလာရောက်ကြောင်းသိရသည်။
“CMP အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း တွေရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် စက်ရုံအများစုမှာအရင်ရ ရှိထားတဲ့ အော်ဒါအဟောင်းတွေနဲ့ပဲ လည်ပတ်နေတာပါ။ အော်ဒါသစ်တွေ မရသေးပါဘူး။ လာမယ့် ဇူလိုင်လကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ပြည်တွင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် အော်ဒါသစ်တွေက ဇူလိုင်လမှာမှ ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်နှင့် ပတ် သက်၍”ကျွန်တော်တို့ Local ထည်တွေ အနေအထားကတော့ ဒီနှစ်ပိုင်း မှာ ဇန်န၀ါရီကနေ မေလအထိပုံမှန် ပါပဲ၊၊ အခုမိုးတွင်းပိုင်းဝင်လာတော့ အပ်ထည်နည်းနည်းပါးတယ်။ ရှေ့ဆက် အလားအလာကတော့ ခြုံပြီး မပြောနိုင်ပေမယ့်ကောင်းမယ်လို့ ထင်တာပဲ” ဟု ပန်းလေပြေ အထည်ချုပ် စက်ရုံမှတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ၌ ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုရီး ယား၊ ဂျပန်နှင့် ဂျာမနီတို့မှ အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများသည် ဂျပန်နိုင်ငံဈေးကွက်ကိုသာ အဓိက ထားတင်ပို့လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ဂျပန် ဈေးကွက်၏ဝေစု သုံးပုံနှစ်ပုံကိုမြန်မာ က ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အမေရိကန်စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် စက်ရုံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ပိတ်သိမ်းခံရ ပြီး အထည်ချုပ် အလုပ်သမားပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်၌မူ ပြည်တွင်း၌ အထည်ချုပ်စက်ရုံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ရှိပြီး လုပ်သားပေါင်း ရှစ်သောင်းကျော်၊ ကိုးသောင်းဝန်းကျင်ဖြင့် လည်ပတ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Thursday, 14 June 2012
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ပမီဒီယာများမှ ဖော်ပြနေမှုများအား ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တွင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ပမီဒီယာများမှ ဖော်ပြနေမှုများအား ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တွင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ပမီဒီယာများမှ ဖော်ပြနေမှုများအား ကန့်ကွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းကို ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှသံရုံးရှေ့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများက "International Media Stop Stating this as religious conflict" နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခအသွင် ဖော်ပြနေခြင်းများ ချက်ချင်းရပ်' ၊ "Rohingya is not Myanmar Ethnicity" ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါ' ၊ "Burma Campaign UK STOP Propaganding" "Burma Campaign UK ၀ါဒဖြန့်မှု ချက်ချင်းရပ်"၊ "Respect Our Sovereignity" မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို လေးစားပါ' စသည့် စာတမ်းများကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံခြားမီဒီယာများ ဖြစ်သော BBC ၊ DVB တို့အား ကန့်ကွက်သော စာတမ်းများဖြစ်သည့် "BBC= Bengali Broadcasting Corporation" ၊ "DVB= Democratic Voice of Bengali" စသည့် စာတမ်းများကိုလည်း ကိုင်ဆောင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ''တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သူတို့ ဖြန့်နေကြတယ်။ ရိုဟင်ဂျာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမျိုးဆိုပြီးတော့။ လူ့အခွင့်အရေးအရဆိုရင် ဘယ်သူမဆို ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ တိုင်းရင်သားတွေက အရင်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားပြီးသား ရှိတယ်။ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ဆိုတာ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့အညီ ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံသားခံယူခွင့် ရှိပါတယ်'' ဟု ဆန္ဒဖော်ထုတ်သော လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုချမ်းသာကျော်က ပြောပါသည်။
ထို့နောက် ကိုချမ်းသာကျော်က ယခုကိစ္စသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာအရေး မဟုတ်ဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ခိုးဝင်လာသော ဘင်္ဂါလီများကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ဆက်လက်ပြောပါသည်။
''ကျွန်တော်တို့က ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုကိစ္စက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကြောင့်မို့လို့ ဖြစ်တာပါ။ ဒီပြဿနာက မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရယ်၊ အစ္စလာမ် အသိုင်းအ၀ိုင်းရယ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက ဒီကိစ္စဟာ အမျိုးသားရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိခိုက်လာတဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုးကန့်ကွက် ဆန္ဒပြရတာပါ'' ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောပါသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းတွင် တိုင်းရင်းသားလူငယ် ၁၀ ဦးခန့် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းမှာ ငါးမိနစ်ခန့်သာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ပြည်ပ မီဒီယာအချို့မှလည်း လာရောက် သတင်းရယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အလားတူ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ကလည်း ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ပြည်ပမီဒီ ယာများအား ကန့်ကွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရမ်းဗြဲ၊ တောင်ကုတ်၊ စစ်တွေ ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး RNDP ကျေညာချက် ထုတ်ပြန်
ကျေညာချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ဗဟိုဌာနချုပ်၊ စစ်တွေမြို့ သဘောထားကြေငြာချက် အမှတ် (၁/၂၀၁၂) နေ့စွဲ-၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၄) ရက် ၁။ ၂၈. ၅. ၂၀၁၂ နေ့တွင် ဖြစ်ပျက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော် ကျေးရွာ အုပ်စု၌ ရခိုင် အမျိုးသမီးအား လူမဆန်စွာ မုဒိမ်းပြုကျင့် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန် သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရမှု အပေါ်၊ ရခိုင်တိုင်း ရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ အနေဖြင့် များစွာ စိတ်ထိခိုက် ၀မ်းနည်း ကြေကွဲ ရပါသည်။ ၂။ ၃.၆. ၂၀၁၂ နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့၌ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ခရီးသွားပြည်သူ (၁၀)ဦးအား ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ကျူးလွန်ကြမှုအပေါ် တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီအ နေဖြင့် လုံးဝလက်ခံ နိုင်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်မဟုတ်ကြောင်း ရှုမြင်သုံးသပ်ပါသည်။ ၃။ ရန်လိုမုန်းတီးခြင်း၊ ရက်စက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ အစွန်းရောက် လွန်းခြင်းများသည် ယဉ်ကျေးသော လူ့အ ဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်အနေဖြင့် ယနေ့ကာလတွင် ခါးခါးသီးသီး လက်ခံနိုင်စရာ မရှိသော အချက်များဖြစ်ပေသည်။ ၅။ ရခိုင်လူ့အဖွဲ့ အစည်းအဆင့်ဆင့် အနေဖြင့် ဤသို့သော လူမဆန်မှုများကို ပစ်ပယ်၍ လူ့အဖွဲ့ အစည်းကြီး၏ အေးချမ်းသာယာမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ချစ်ခင်မှု၊ နွေးထွေးမှု စသောအချက်များကို မြှင့်တင် ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် အေးချမ်း လုံခြုံသော လူ့ဘောင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ရပေမည်။ ၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အခြားအခြားသော မလိုလားအပ်သည့် ပြဿနာ၊ ပဋိပက္ခများ ပေါ်ပေါက်ခြင်းများ ချုပ်ငြိမ်းရန်နှင့် အေးချမ်းလုံခြုံမှု ခိုင်မာစွာ ပေါ်ထွန်းနိုင်စေရန်၊ မည်သည့်ဖြစ်ပွားပေါ် ပေါက်သော ပြဿနာအခက် အခဲများမဆို အား လူသားဆန်စွာနှင့် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်စွာသာလျှင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ကြသင့်ပါကြောင်း လေးစားစွာတိုက် တွန်းအပ်ပါသည်။ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ဗဟိုဌာနချုပ်၊ စစ်တွေမြို့ ဗဟိုဌာနချုပ်၊ စစ်တွေမြို့ သဘောထားကြေငြာချက် အမှတ် (၂/၂၀၁၂) နေ့စွဲ ၂၀၁၂-ခုနှစ် ဇွန်လ (၄) ရက် ၁။ ၃.၆.၂၀၁၂ နေ့ညနေပိုင်းက စစ်တွေမြို့၊ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းရှေ့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာ၏ အစမှာစစ် တွေမြို့ စက်ရုံစုရပ်ကွက် (နာဇီဈေး) အခွန်ကောက်ခံ သူအုပ်စုများ၏ ပဋိပက္ခဆက်နွယ်ပြီး “အောင်သန်းဝေ” ဆိုသူ ပျောက်ဆုံးနေမှုအတွက် တိုင်တန်းတောင်းဆို ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ၂။ ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုယ်တိုင် “အောင်သန်းဝေ” အား လိုက်လံရှာဖွေတွေ့ရှိ လာခဲ့သည့် အတွက် အမှတ် (၁) ရဲစခန်းရှေ့ရှိ တောင်းဆိုနေကြသူ လူအုပ်အား “အောင်သန်းဝေ” ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်း။ အောင်သန်းဝေကိုယ်တိုင် တောင်းဆိုသူလူ အုပ်များရှေ့မှောက်၌ စကားပြောဆိုခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၃။ ထိုနောက်တွင် အဓိကရုဏ်း အသွင်ဆောင်လာသော လူအုပ်အား သက်ဆိုင်ရာမှ အင်အားသုံးပစ်ခတ်နှိမ် နင်းခြင်း၊ (၁၁)ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီး စစ်တွေဆေးရုံကြီး၌ အတွင်းလူနာအဖြစ် ကုသရခြင်းတို့ ဖြစ်ပျက်ရမှုနှင့် ပတ် သက်၍ ရခိုင်ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ အထူးထိခိုက်ခံစား ရပါကြောင်း ထုတ်ပြန်အပ်ပါ သည်။ ၄။ သက်ဆိုင်ရာမှ အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရာတွင် အင်အားအလွန် ကြီးမားစွာ အသုံပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ရခိုင် ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးနှင့်ထပ်တူ အထူးထိခိုက်ခံစားရ ပါကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန် အပ်ပါသည်။ ၅။ ၃.၆.၂၀၁၂ နေ့ဖြစ်ပွားသော ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ကြရေးကိုလည်း ကောင်း၊ ပြည်သူများ၏ သံသယကင်းစင်ရေးအတွက် အဖြစ်အပျက်၏ သတင်းမှန်များကို သက်ဆိုင်ရာမှ တိကျ စွာ ထုတ်ပြန်ပေးရေးကိုလည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ဗဟိုဌာနချုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ဗဟိုဌာနချုပ်၊ စစ်တွေမြို့
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Sunday, 10 June 2012
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးပေါ် အခြေအနေကျေညာပြီ
ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ဖြင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း မရှိတော့သဖြင့် ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာ အစိုးရမှ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကျေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကျေညာလိုက်သော အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၊ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၂ ၁၃၇၄၊ နယုန်လပြည့်ကျော်၊ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၂ ဇွန် ၁၀ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာခြင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်အချို့တွင် ပြည်နယ်အေးချမ်းမှုပျက်ပြား သည့်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နေမှုကြောင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၂ ဇွန်လ ၈ ရက်မှ စတင်၍ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်၍ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း အကြမ်းဖက်မှုများမှာ ပိုမိုများပြားကျယ်ပြန့်လာပြီး ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ရုံဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေနိုင်ရေးကို အမြန်ဆုံးပြန်လည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀၂ ပုဒ်မခွဲ ဃ အရ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယနေ့မှစ၍ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေငြာလိုက်သည်။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ က အရ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိစေရန် တပ်မတော်၏ အကူအညီကို ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။ ဤအမိန့်သည် ယနေ့မှ စ၍ နောက်ထပ် အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်မှု မရှိမခြင်း အတည်ဖြစ်သည်။ ဤအမိန့်သည် ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်ရမည်။ (ပုံ) သိန်းစိန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်တွင်ဖြစ်ပွားနီသည့် ဘင်္ဂလီများ၏ မတရားအနိုင်ကျင့် ကျူးကျော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP) ၏ သဖောထားထုတ်ပြန်ချက် ၁။ ရခိုင်ပြည်တွင်း၌ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နီသည့် ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ၏ မတရားအနိုင်ကျင့်ကျူးကျော်မှုများသည် လူဦးရေ အဆမတန်ထူထပ်သည့် တဖက်နိုင်ငံနှင့် မူဆလင်အစွန်းရောက်များ၏ စနစ်တကျကြိုတင် စီစဉ်ပြီး လုပ်ဆောင်နီသည့် ကျူးကျော်မှုဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)မှ ရှုမြင်သုံးသပ်သည်။ ၂။ ဤမတရားကျူးကျော်သတ်ဖြတ်မှု၊ ရခိုင်လူမျိုးများအပေါ် ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ၏ အနိုင်ကျင့်မှုများကို ကြိုတင်မတားဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းသည် အုပ်ချုပ်သူမြန်မာအစိုးရ၏ တာဝန်မကျီပွန်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP) မှ သုံးသပ်ယူဆသည်။ ၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိရခိုင်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နီသည့် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များကို ချက်ချင်း အရေးယူ လုပ်ဆောင်ပီးရန်တာဝန်ရှိသည်။ (က) လက်ရှိ ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ၏ မတရားကျူးကျော်သတ်ဖြတ်နီမှုများမှ ရခိုင်ပြည်သူများအား အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပီးရန်။ (ခ)ရခိုင်ပြည်တွင်းသို့ မတရားကျူးကျော်ဝင်ရောက်နီထိုင်နီသည့် တဖက်နိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလီမူဆလင် များအား ရခိုင်မြီမှ ပြန်လည်မောင်းထုတ်ပီးရန်။ (ဂ) ပျက်စီးဆုံးရှူံးလားသည့် ရခိုင်ပြည်သူများ၏ ဘ၀ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူပီးရန် (၄) အထက်ပါ အချက်များအား အုပ်ချုပ်သူ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ရခိုင်အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များအား ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP) အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်သူတရပ်လုံးနှင့်အတူရပ်တည်၍ မတရား ကျူးကျော်သူ ဘင်္ဂလီများအား ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်လားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပီးအပ်ပါသည်။ (၅) ဤဘင်္ဂလီကျူးကျော်မှုအား ခုခံတော်လှန်စစ်အတွင်း မည်သည့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မဆို လိုအပ်သလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၆)ထို့အပြင် ဤအကျပ်အတည်းအခြေအနေအရပ်ရပ်အောက်တွင် ရခိုင်ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးကို အထူးအာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုသလို၊ တဖက်တွင်လည်း ရန်သူများ၏ လှည့်ကွက်များ အတွင်းသို့ မကျရောက်မိစေရန် အထူးသတိထားလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါကြောင်း မိမိရို့ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက် ရေးပါတီ(ALP) ၏ သဖောထားကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည်။ စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP) ရက်စွဲ။ ။၂၀၁၂ ခု ဇွန်လ (၁၀) ရက် ဆက်သွယ်ရန်။ ။ +၉၁ ၉၆၁၂၈၆၉၄၃၄
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော ပဋိပက္ခများကြောင်း ဒုက္ခရောက်နေကြသော ရခိုင်ပြည်သူများအား ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် စေတနာရှင်များအနေဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ (ဗဟိုခွဲ)ရန်ကုန် အမှတ်(34)၊ 4-လွှာ(၀ဲ)ဘက်၊ ကျောက်မြောင်းအရှေ့ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ရတပ (ဗဟိုခွဲ)ရန်ကုန်ရုံး -0973044927 ဦးဇော်အေးမောင် (ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး၊ရန်ကုန်) 095140407 ဦးသာထွန်းလှ (ပါတီအတွင်းရေးမှူး) 098532116 ဦးမြင့်နိုင် (ပါတီဘဏ္ဍာရေးမှူး) 095105804 ဦးကျော်သန်းလှိုင် (ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်) 0973064108 ဦးအေးမောင် (ရန်ကုန်တိုင်း ဥက္ကဌ) 0943043035
သံတွဲ GTI မှ ကျောင်းသားများကို အရေးပေါ် နေရပ်ပြန်ပို့
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့ရှိ အစိုးရ GTI တက်ရောက်နေသည့် တခြားမြို့နယ်များမှ ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများကို အရေးပေါ် အမြန် ရေယာဉ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ နေရပ် အသီးသီးသို့ တာဝန်ရှိသူများမှ ပြန်လည် ပို့ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရ သည်။
ရပ်ဝေးမှလာရောက် ပညာသင်ကြားနေသည့်ကျောင်းသားများကို မလိခ အမြန်ယာဉ်နှင့် ပို့ပေးလိုက်ကြောင်းကို မြို့ခံတဦးက ယခုကဲ့သို့ပြောသည်။
“ဟုတ်ကဲ့။ ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲဘက်ကကျောင်းသားတွေကို စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ဒီနေ့ မလိခ အမြန်ယဉ်နဲ့ ပို့ပေး လိုက်တာပါ။ တချို့ကို ရွှေပြည်တန် အမြန်ယာဉ်နဲ့ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
တောင်ကုတ်မှ ကျောင်းသားများကို ယမန်နေ့ကတည်းက မိဘများက စိုးရိမ်သည်အတွက် မိမိနေအိမ်သို့ ပြန် လည် ခေါ်ဆောင်ထားပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း တောင်ကုတ်မြို့ခံတဦးဖြစ်သူ ကိုမင်းအောင်က ပြောသည်။
“ မနေ့ကတည်း ပြန်ခေါ်ထားကြပါတယ်။ မနေ့က သံတွဲမှာတက်နေတဲ့ GTI ကျောင်းသားတွေကို ကား ၄ စီး နဲ့သွားပြီး မိဘတွေက ပြန်ခေါ်ထားကြပါတယ်။ စိုးရိမ်လို့ပါ။”
ယခုကဲ့သို့ ပြန်ပို့နေခြင်းမှာ သံတတွဲ မြို့ခံမူဆလင် ဘာသာဝင်များနှင့် ကျောင်းသားများအကြား ပြဿနာ မဖြစ်ပွားအောင် ပို့ ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းကိုလည်း ယာယီ ပိတ်ထားလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တောင်ကုတ်မြို့တွင် ကောလဟာသတင်းများ အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေသော်လည်း အခြေအနေမှာ ငြိမ်သက် လျှက်ရှိကြောင်း ကိုမင်းအောင်က ဆက်ပြောသည်။
“ ဒီမှာ လုံခြုံရေးကလည်း ပုံမှန်ပါ ထူးထူးခြားခြားတော့ မတွေ့ရပါဘူး။ ကောလဟာလ သတင်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ သံတွဲဘက်က ကားတွေနဲ့လာတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ သံတွဲမှာလည်း မူဆလင်တွေရှိ တယ်ဆိုတော့ သတင်းတွေက အမျိုးမျိုးထွက်နေတယ်။”
မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ရမ်းဗြဲမြို့ သပြေချောင်းကျေးရွာမှ အသက် ၂၆ နှစ် မသီတာထွေး မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ရပြီး အဆိုပါ သတ်ဖြတ်ခံရမူ အပေါ် မကျေမနပ် ဖြစ်နေသော တောင်ကုတ်မြို့မှ လူအုပ်စု တစုက အပြစ်မဲ့ မူဆလင် ဘာသာဝင် ၁၀ ဦး ကို ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေအနေမှာ တင်းမာလျှက် ရှိသည်။
သတင်း — June 5, 2012 at 4:48 pm (http://www.narinjara.com/burmese/?p=612)
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Friday, 8 June 2012